I-Avibase - Izinyoni Zokuhlola Zezwe
Lezi zincwadi zokuhlola zisekelwe kolwazi oluhle kakhulu olutholakalayo ngalesi sikhathi. Zisekelwe emithonjeni ehlukahlukene engangiyihlanganisela eminyakeni eminingi, futhi ivuselelwa njalo. Ngiyajabula ukunikeza lezi zincwadi zokuhlola njengesevisi kubagibeli bezinyoni, kodwa zingaphansi kwezinga elithile lokungalungi. Uma uthola noma yikuphi iphutha, sicela ungangabazi .
Izinhlobonhlobo zezinyoni zezwe ziyingxenye ye-Avibase kanye nezinyoni ze-Bird emhlabeni wonke, ezakhiwe futhi zigcinwe nguDenis Lepage, futhi zenziwa yi-Bird Studies Canada, ongumlingani ohlangene we-Birdlife International.
Beka uphawu kumephu
Bonisa uhlu lokuhlola: Amazwe / izindawo / izifunda Faka phakathi izifunda / izifundazwe Bonisa wonke amasayithi
Faka igama lesifunda:
I-Avibase ivakashelwe 288,465,436 izikhathi kusukela mhla zingama-24 kuJuni 2003. © Denis Lepage | Inqubomgomo yobumfihlo